(MM) ျမန္မာ ရဲ နဲ႔ (SG) စင္ကာပူ ရဲ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ ကြာျခား ေနရတာလဲ….? – Let Pan Daily
(MM) ျမန္မာ ရဲ နဲ႔ (SG) စင္ကာပူ ရဲ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ ကြာျခား ေနရတာလဲ….?
Let Pan | July 31, 2020 | World News | No Comments
(MM) မြန်မာ ရဲ နဲ့ (SG) စင်ကာပူ ရဲ ဘာ ကြောင့် ဒီလောက် ကွာခြား နေရတာလဲ….?
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တ ပတ် အလွန် ၁၀ ရက်လောက် ကပေါ့ ကျတော့ ဘဏ်ထဲ ကနေ Unauthorized Transaction singapore dollar S$400 နီးပါး Hack လိုက် ရပါတယ် ။ ဘယ်က မှန်းမသိ ဖြတ်သွားပြီးနောက် စိတ်ညစ်ညူးစွာ နဲ့ သိသိချင်း ဘဏ် ကို ချက်ခြင်း ဖုန်းခေါ်ပြီး ဘဏ်အကောင့် ကို အရင်ပိတ် လိုက် ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ မှာ ဘဏ်ကို သွား ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပါတယ်။ ဘဏ် ဝန်ထမ်းတွေအေ နနဲ့ Emergency case အဖြစ် ချက်ခြင်း အလုပ် လုပ်ကြ ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ရဲစခန်း Report လိုအပ် ပါတယ်ပြောလို့ ရဲစခန်းသွားလိုက် ရပါတယ်.။ တစ်နာရီ ကျော်ကျော်လောက် စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး အချက် အလက်တွေ ယူသွား ပါတယ်။ အဲ့နောက် သူတို့ ရအောင်လုပ်ပေး ပါမယ်ဆို ပြီး ပြန်လွတ်လိုက် ပါတယ်။ နောက်တစ်ရက်နေ့လည်းခင်း မှာ ရဲစခန်းက ဖုန်းခေါ်လာပြီး သူ တို့ ဘဏ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ် လုပ်နေကြောင်း ရှင်းပြပြီး စိတ်အေးအေးထား ဖို့နဲ့ တခြား ထူးခြားချက်ရှိရင် ပြန်ပြော ပါမယ် ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ၇ ရက်လောက် အကြာ မှာ ပါသွားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ပြန် ဝင်လာ ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဘဏ်ကရော ရဲစခန်း ကပါ စာတွေလက်ခံရ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြောချင်တာ ခုမှစမှာပါ။ ပထမဆုံး ဘဏ်ပါ ဖြစ်စဉ်စ ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကစ လို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံတွေက တကယ် ကျေနပ်စရာပါ။ အပြစ်ပြောစရာ အနဲငယ် ရှိ တာတောင် နားလည်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရရှိခဲ့ ပါတယ်။
နောက်တစ် ခုကတော့ ရဲဌာန ပါ (ဒါကို အဓိကပြောချင်တာပါ) ဖြစ်စဉ် ဖြစ်တဲ့နေ့က ရဲစခန်း ရောက်ပြီး ရဲတွေ အလုပ်လုပ်ပုံတွေ ၊ ပြည်သူတစ်ယောက်ပေါ် ဆက်ဆံမှုတွေက တကယ့်ကို လေးစားအားကျ အတုယူချင် စရာပါ.. ပိုက်ဆံပြန် မရခင် ကြားထဲမှာ လည်း စိတ်ပူစရာမလို့ဖို့ သူတို့ အလုပ်လုပ်နေကြောင်း လှမ်းပြောတာ ကလည်း ထူးခြားချက်ပါ ဒီနေ့ရတဲ့ စာဆို အထဲမှာ သူတို့ ဘာတွေ လုပ်ပြီးကြောင်း ဘာတွေ ဆက်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာအပြင် တစ်ခုခုဆို ဆက်သွယ်ဖို့ အရာရှိ တစ်ယောက်အမည် နဲ့ ဖုန်းနံပတ်ပါ ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်အစဆုံး မှာ ပိုက်ဆံ တစ်ကျပ်မှ မကုန်ခဲ့သလို လုပ်ငန်းစဉ် အားလုံး မှာ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရရှိ ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ ။ ဒါတောင် ကိုယ်ဟာ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်ဖြစ် တာတောင် သေသေချာချာ ဂရုတစိုက် ဆက်ဆံမှုတွေက နိုင်ငံသား ဆိုရင်တော့ ပြောစရာ လိုမထင် တွေးမိတာလေးကတော့ ကျတော့် တို့ နိုင်ငံ ရဲ့ ရဲဌာန တွေကို ပြောင်းလဲစေချင်မိတာ အမှန်ပါ။
ကိုယ်ဟာ ရဲစခန်းတွေ ကို ရောက်ဖူးခဲ့ ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ အဖေခေါ် ဘယ်သူ့ ဆရာခေါ်ရမှန်း မသိ အထဲမရောက် ခင် ဂိတ်စောင့်နဲ့ တင် ကြောက်နေခဲ့ရ တာကတော့ ကိုယ်တွေ့ပါ။ ပေးရပြန်ပြီ လက်ဖက်ရည်ဖိုး တိုတိတိုတိ တွေ.. ပိုက်ဆံမရရင် လေသံကမာ အလုပ်က မလုပ်ချင် ။ ခုနောက်ပိုင်း နေရာ အချို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် နေရာအတော် များများက ဒုံရင်းက ဒုံးရင်းရှိနေဆဲပါဘဲ ။ Well Organization ဖြစ်ဖို့ ကျတော်တို့ ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ တည့်မတ်ပေးနိုင် တဲ့ အစိုးရ ကောင်းတစ်ရပ် လိုအပ်ပါတယ်။
နို့မို့ဆို ရင်တော့ အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တော်တော် များများ ကို ပြည်သူ အများစု က ရွံရှာ နှာခေါင်းရှုံ့နေကြအူံးမှာဘဲ။ ကောင်းမွန်သော အစိုးရတစ်ရပ်ရရှိဖို့ သင့်လက်ထဲမှာ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရှိ ပါတယ် ။ သင်မဲပေးခြင်း ဟာ သင့် အနာဂတ် အတွက်နဲ့ သင့်ရဲ့ နောင်လာမယ့် မျိူးဆက် အတွက် ပါ ဒါကြောင့် ကောင်းမွန်းသော ရလဒ်တွေ ဆက်ရ ဖို့ မဲပေးကြပါ ။
အေမရိကန္ကို ေက်ာ္ခ်င္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ ေျမေခြးအမဲလိုက္အစီအစဥ္ကို ဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ အက္ဖ္ဘီ အိုင္ၫႊန္မႉး